ဝိုင်းစု စကတ် ပိုတို လိုက်ပါပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ၀ိုင်းစု စကတ် ပိုတို လိုက်ပါပြီ။
၀ိုင်းစု စကတ် ပိုတို လိုက်ပါပြီ။
Posted by Bayote on Apr 8, 2010 in Celebrity, Entertainment | 68 comments
Gazette ပရိတ်သတ်များ မှာ ၀ိုင်းစုစကတ် ပိုတိုခဲ့ယင် ဆိုပြီး တောင်းခဲ့ကြလို့ ပိုတိုလာပါပြီ။ ဒီထင်ပိုပြီး တိုခဲ့ယင်တော့ . . .ဗျာ. . . မှတ်ချက် စေတန်ဘလော့မှ ကူးယူထားတာပါ။
ဟေ့ father ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ခွေးတစ်ကောင်ဟောင်လိုက်တိုင်းလိုက်ပြီးဟောင်တတ်တဲ့လူစားမျိုးလား၊ ဘာသာရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်ကိုငါဝင်ကြည့်ပါတယ်
မင်း မသိသေးတဲ့အရာတစ်ခုကို အရမ်းမဝေဖန်မိစေနဲ့
မင်း မတတ်သေးတဲ့ ပညာတစ်ခုလိုပေါ့၊ တတ်ပြီးမှတန်ဖိုးရှိမှန်းသိမှာ
ငါ့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မွတ်စလင် ၊ ခရစ်ယာန်တွေများပါတယ်
ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံးက မင်းလို အောက်တန်းမကျဘူး အဲလိုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ မင်းမှတ်ထား
စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ကွ၊” လူယုတ်မာမဖြစ်စေနဲ့” တဲ့ ဒီ့ထက်ပိုတာက
” လူယုတ်မာထက်ယုတ်မာတဲ့လူ မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ ”
မင်း အမြင်မှန်ရအောင်ပေးလိုက်တဲ့ စကားစုတစ်ခုလို့ပဲမှတ်ပါ။
ငါ… ဆိုတဲ့ ကောင်။ မင်းက တရားပြသလိုလိုနဲ့ လိပ် စကားပဲ ပြောသွားတာပဲ။ ပါးကိုက် ရင် နားကိုက် တတ်တယ်ကွ။ ငါကလည်း Doggy ဆိုရင် မင်းကလည်း နာဇီပါတီဆိုတဲ့ Doggy ဟောင်လို့ ၀င်ဟောင်တဲ့ Doggy ပဲပေါ့။ ဘာထူးလဲ။ ငါ အဲ့ဒီ လင့်က် ကို ညွှန်းတာ မှားတာကို ၀န်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်း က ငါ့ကို ပြောသလို အဲ့ဒီ နာဇီ ပါတီနဲ့ ဟို ချီးနှိုင်းထက် ဆိုတဲ့ ကောင်တွေပြောထားတဲ့ အောက်မှာတော့ ၀င်မပြောပါလားကွ။ မင်းက တရားသမား ဆိုရင် ၃ ယောက်လုံး အောက်မှာ ပြောရမယ်လေကွာ။ မင်းပြောခဲ့တဲ့ … ” မင်း မသိသေးတဲ့အရာတစ်ခုကို အရမ်းမဝေဖန်မိစေနဲ့
မင်း မတတ်သေးတဲ့ ပညာတစ်ခုလိုပေါ့၊ တတ်ပြီးမှတန်ဖိုးရှိမှန်းသိမှာ” ဒီစကားကို အဲဒီ Doggy ၂ ကောင်ဆီမှာလဲ ၀င်ရေးလေကွာ။ အခုတော့ မင်းက ယောက်ျားစကားပြောပြီး ထမိန်ဝတ်ထားသလို ဖြစ်နေပြီ။ ငါယုတ်မာတာ မဟုတ်ဘူးကွ။ မင်းကသာ စုတ်ချာနေတာ။ မင်းသာ အမြင်မှန်ရဖို့ကြိုးစားပါကွာ။ မင်းဘ၀ အောင်မြင်မှာပါ။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတော. မ ဖျက်လို.ပြည်ပျက်တယ်လို.ကြားခဲ.ဘူးပါတယ်။
အခုတော. လေးစားစရာ ဂုဏ်ယူစရာ စံပြုစရာ ဘာမှမရှိတဲ. မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပုံလေးကို မြင်တာနဲု.
မဆီမဆိုင်တာတွေလျှောက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် စကားနိုင်လုပြီးပြောတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီး။
အဖိုးတန်တဲ.မေတ္တာတရားတွေကို ဘာမဟုတ်တဲ.မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အလဟဿမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒ
Hacker R says:
အဒ်မင်အဖွဲ့ခင်ဗျား။ ရတနာပုံ သတင်းစာဟာ ခင်ဗျားတို့ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ သတင်းစာ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို စောင့်ထိန်းပေးကြပါ။ အပေါ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ် စော်ကားတဲ့ စာလုံးတွေကို ခင်ဗျားတို့ ပြောင်းလဲပေးပေမယ့် ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်၊ ဘာသာတရားနဲ့ ယှဉ်တဲ့၊ ထိခိုက်နစ်နာမဲ့ စာလုံးတွေကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ဘူး။ ဒီ ပြသနာတွေကို ခင်ဗျားတို့ပဲ မွှေးခဲ့တာပဲ။ အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းစာ တစ်စောင်ဟာ ဒီလို စော်ကားမှုတွေ ကို လက်ခံမှု မပြုသင့်ဘူး။ အစတစ်ယောက်ရေး ကတည်းက ခင်ဗျားတို့ ပယ်ဖျက်သင့်တယ်။ Unapprove လုပ်သင့်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရှိနေတဲ့ လက်ရှိအချိန်ထိ ရပ်တည်နေတဲ့ သတင်းစာကြီးတွေ ဒီလိုအရေးအသားကို လက်မခံကြပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို Media ရဲ့ စည်းကမ်းကို ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် လိုက်နာရဲ့လား စမ်းစစ်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ ကောမန့်ကို မဖျက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဖျက်ရင်ရင်း ကျွန်တော် Script ဖမ်းထားတယ်။ ပြန်တင်မယ်။ အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စော်ကားထားကြတဲ့ ဦးနှောက်မဲ့ လူတန်းစားတွေဟာကို အရင်ဖျက်ပါ။ သူတို့ဟာ ဖျက်လိုက်ရင် ကျွန်တော်လည်း ရပ်ပါ့မယ်။ ဒါ ခင်ဗျားတို့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးကြီး ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ဒါ အဆင့််အတန်းရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုပဲ မီးမွှေးနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ DDos နဲ့ တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတုို့ သိမှာပါ။ DDos ဒဏ်ကို WordPress မခံနိုင်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မြန်မြန်စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံး အကျိုးကို လိုလားပါတယ်။ စစ်အစိုးရလို လူအချင်းချင်း ကုန်းမတိုက်ပေးပါဘူး။ ဒါပါပဲ။
ဘာသာေ၇းတွေမပြောနဲ့ မင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲမဟုတ်လား ၊ စော်တွေကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဘာသာေ၇းကိုမဝေဖန်နဲ့၊ဘယ်ဘာသာ ကဘဲဖြစ်ဖြစ်
မိုက်၇ိုင်းတဲ့ကောင်က မိုက်၇ိုင်းမှာပဲ။ ဘယ် ဘု၇ားသခင်ကမှမိုက်၇ိုင်းတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူး ၊ မင်းမိုက်၇ိုင်းတာမင်းအမေ မဆုံးမလို့ လို့မှတ်ယူလိုက်မယ်၊
ီDDos တဲ့လား။ …မသိပေါင်… script ကတော့ကြာပါပြီ သုံးကြတာ…
***သင့်ကြောင့် လူအများ ကောင်းမှု မပျက်စီးပါစေနဲ. လို့ သတိပေးပါတယ်။***
ဒီလောက်တော်ယင် Google.com ကိုဟက်ပြပါလားကွယ်။ မင်းစကားအပြောအဆို က တော်တော်ရင့်နေပါတယ်။လူအများကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ Mandalay Gazette ကို စော်ကားရုံမက ပရိတ်သတ်ကိုပါ စော်ကားရာရောက်တယ်။
http://www.khitlunge.org.mm ကိုလာခဲ့ပါလား။ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ မင်းဘယ်လောက်တော်တာကို ကြည့်တာပေါ.ကွာ ညီလေးရာ။ http://mtalk.net.mm/ ကိုလည်းလာနိုင်တယ်နော်။
ညီလေးပြောပုံ တော်တော် အဆင့်မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မင်းပြောတိုင်း ကြောက်ရမှာလား
အစ်ကိုစောင့်နေမယ်။ ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်။ ဗျဲ။
ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း သူတိုကစင်ပေါ်မှာဝတ်တာ အကျိုးရှိတယ်လေ ပရိတ်သတ်ကြိုက်တယ် ပိုကြိုက်လေ ပိုက်ဆံ ပိုရလေပေါ့ ကျွန်တော်တို့အစ်မတွေ ညီမတွေဝတ်ရင်တော့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်နေမယ်နော် စဉ်းစားစရာပါ….။
အပေါ်ကအစ်ကိုတွေကိုက်ကြမှာလား အဲလေ တိုက်ကြမှာလား အင်းမကောင်းတာတော့မကောင်းပါဘူးပေါ့ အစ်ကိုတို့ရန်ဖြစ်ရင် ပိုမကောင်းဘူးပေါ့ ဝေဖန်တာကောင်းပါတယ် ရိုင်းတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ အားလုံးက အမှားမပါအောင် ဆင်ခြင်ရမှာပေါ့……။
Whatever, we like that :D
အမြင်မတော် တာတွေ့လို့ဝင်ပြောမယ်။ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း မက လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေက ဒီလို အရှက်မရှိတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နေ
ရင်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ပတ်သတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဘာသာတိုင်းမှာ အရှက်မရှိတဲ့လူတွေ ၊ ဘုန်းကြီးတွေ ရှိ
နေတာဘဲ။ ခရစ်ယာန် ၊ ဟိန္ဒူ ၊ မွတ်စလင် ဘာသာတိုင်းမှာ အရှက်မရှိတဲ့စုန်းပြူးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းအရှက်မရှိတာကို
အကြောင်းပြုပြီး ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုတွေ မဖန်တီးကြပါနဲ့
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်ကြနဲ့ နော်
ခက်လိုက်တဲ့ခေတ်ပေါ် အမျိုးသမီးများပါလား ကျွတ်..ကျွတ်..။
A Lin Phyu says:
ချင်းတောင်တန်းရောက်ရင်“ နာဂ လုံချည် ” ဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးဦးမယ်။
This is the first time for me, I saw very rude comment on the post. I am very sad. Now , I read all the comment about that young lady. Very sad. I always read this website for technology, computer, and many more. I read all the comment also. But, this time I am very sad. For me, this young lady is nothing . What she can do for our people? I means, for Myanmar people. I believe not much. Now, her photo destroy our unity , our friend ship , our community. Very sad.:(
ဘယ် ဘာသာေ၇း က မှ အယုတ် စကားတွေ ပြော ထွက် ဖို့…… အချင်းချင်း အောက်တန်းကျ တဲ.စကားလုံးတွေ နဲ. ဝေဖန် ဖို. မသွန် သင် ထား ဘူး၊
ကိုယ့် ဘာသာ တ၇ား ကို အစော်ကားမခံနိုင် ဘူး…ဆို၇င် အပြာအဆို/ ကိုယ်ကျင်.တ၇ား သူတပါး အထင်မသေး၇အောင်နေကြပါ… ကိုယ်. ဘာသာ တ၇ားရဲ. Sampleဟာ ကိုယ် ပဲဖြစ်တယ်… မင်းဟာအထင်သေးစ၇ာ ကောင်းနေ ၇င် မင်း ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတ၇ား ကိုစော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေမင်းကို လာပြောမှာပဲ….
ဘာသာေ၇းကို တိုက်ခိုက်တာသူမဟုတ်ဘူး…မင်းကြောင်.ဘာသာေ၇း အစော်ကားခံ၇တာ….မင်းအနေမှန်၇င် ဘယ်သူမှမင်းကို လာအစော်ကားမှာမဟုတ်ဘူး…..
….တကယ်ဘာသာေ၇းကိုင်းရိူင်း တဲ.လူတွေ.. ဒီလိုမတိုက်ခိုက်ဘူး….ဘု၇ားသွားကျောင်းတက် …ဖို့မမေ့ကြနဲ့…ဆင်ခြင်ကြပါ။
.အချင်းချင်းမေတ္တာတ၇ားထားကြပါ။ ဘာသာတ၇ားတိုင်းမေတ္တာတ၇ားကိုေ၇ှး၇ူ တယ်….သူတပါး၇ဲ.ဘာသာကိုလည်းမစော်ကားနဲ့……စော်ကား၇င်မင်းအပြစ်လုပ်တာပဲ….
A lin phyuေ၇ နာဂတွေက ချင်းတောင်တန်းမှာမနေဘူး။ မောင်းက မိန်းကလေးတွေ ၀တ်တာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဝင်စား၇င် ကောင်းကောင်းလေ့လာလေ။
ဝိုင်းစု ကိုပြောချင်တာနဲ. သူတပါး cultureစော်ကားတာမကောင်းဘူး။။
ဟ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာတုန်းဟ။ ၀ိုင်းစုတိုတဲ့အကြောင်း ကွန့်မန့်စစခြင်းတုန်းက ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အခုမှ ပြန်ကြည့်မိတာ ဟိုကောင်မ ကနေ ဘယ်လိုင်းတွေပြောင်းကုန်ကြတာတုန်း။ ဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။ ထစ်ကနဲ့ဆို ဒီဘာသာရေး ဘက်ရောက်ပြီး ငြင်းကြတာဘဲ။ ရင့်ကျက်သင့်ပြီ ထင်တယ်။